साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ४, २०७५
यदि प्रेमको कविता लेख्न रुचाउनुहुन्छ भने तपाईंका लागि एउटा अवसर छ । स्पोकन वर्ड नेपालको आयोजनामा भोलि शनिबार बानेश्वरस्थित मोक्षमा हुन लागेको वर्ड वारिवर्स लाइभ : प्रेमको कवितात्मक अभिव्यक्तिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ  पुरा पढ्नुहोस्
सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका प्रेमीबाट हत्या होला भनेर कसले कल्पना गरेको हुन्छ ? त्यो पनि वर्षौंदेखिको प्रेमसम्बन्ध र १० महिनादेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएको प्रेमीबाट । यस्तै नसोचेको घटना बेहोरिन् खोटाङ ज्यामिरेकी ३५ वर्षीया सोनिया राईले । पुरा पढ्नुहोस्
कुनै समय नेपाली फुटबलले धेरै आशा गरेका खेलाडी हुन्— शिव श्रेष्ठ । शिवले हालै एउटा खुसीको क्षण भने आत्मसात् गरेका छन् र त्यो हो— उनको आफ्नै विवाह । श्रेष्ठ हालै विवाह बन्धनका बाँधिएका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
एनसेलले बिक्री बापतको लाभकर तिर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले ढिलै भए पनि सही फैसला गरेको छ । आशा छ एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी गरेर कानुनी एवं वैधानिक दायरामा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
सुरज काफ्ले, फाल्गुन ४, २०७५
मेरो पत्र–मित्रताको पत्र । लेखेकै दिन पठाउन पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो होला । टिकटको व्यवस्था गर्नु ठूलै समस्या थियो । ठूलोबुबाको छोरा गा.वि.स. हुलाकमा काम गर्नुहुन्थ्यो । था’ पाउनुभयो भने जिस्क्याएर हैरान । दाजु जिल्ला गएको मौकामा मैले मित्रताको हात अघि बढाएँ, अर्थात् चिढी पठाएँ । पुरा पढ्नुहोस्
भारत सिलोङको सोलमेट ब्यान्ड नेपालमा १० वर्षपछि पाइला टेक्दैछ । सोलमेटले आज शनिबार झम्सिखेलस्थित मोक्षमा दर्शकहरूसामु ब्लुज, ब्लुज रक, सोल, रक एन रोल, फंक एन्ड आर एन्ड बीजस्ता गीतमार्फत दर्शक झुमाउनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
युवा लेखक सुविन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समर लभमा आधारित चलचित्र ‘समर लभ’ गत शुक्रबार प्रदर्शनमा आयो । उक्त चलचित्रले औसत व्यापार गरेको हलवालाहरू बताउँछन् । चलचित्र प्रदर्शनको अघिल्लो दिनदेखि परेको झरीका कारण शुक्रबारको व्यापार औसत रह्यो, तर शनिबार भने ‘समर लभ’ले दर्शकको राम्रो साथ पायो । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले आफ्नो पछिल्लो चलचित्र ‘क्याप्टेन’ लाई असफल बनाउन केही तत्व सक्रिय रहेको गुनासो गरेका छन् । भुवनको गुनासो थियो– ‘यो अरू केही नभएर चलचित्रलाई बदनाम गर्न चाहनेहरूको हर्कत मात्र हो ।’ ‘मलाई के लाग्छ भने यो सबै क्याप्टेनलाई बदनाम गर्न चाहनेहरूको चाल हो, केसीको भनाइ छ । पुरा पढ्नुहोस्